Deoteronomia 14.22-29 : VAHOAKAN'ANDRIAMANITRA, VAHOAKA MIAVAKA
Deoteronomia 14.22-29&nbsp; &nbsp;F.3VAHOAKAN'ANDRIAMANITRA, VAHOAKA MIAVAKAFanatitra ho an'Andriamanitra sy ny mpanompony.&nbsp;Ny fitahian'Andriamanitra no ahazoan'ny olona mamokatra (24b) ka mendrika...
Deoteronomia 14.1-21 : VAHOAKAN'ANDRIAMANITRA, VAHOAKA MIAVAKA
Deoteronomia 14.1-21 F.3&nbsp;VAHOAKAN'ANDRIAMANITRA, VAHOAKA MIAVAKA&nbsp;Fombafomba rehefa misy maty. Ny firenena rehetra dia samy manana ny fombafomba fanaony avy rehefa misy fahoriana. Ny sasany amin'iz...
Deoteronomia 13.2-19 : VONOINA IZAY MITAONA HO AMIN'NY FANOMPOAN-TSAMPY
Deoteronomia 13.2-19 F.6 VONOINA IZAY MITAONA HO AMIN'NY FANOMPOAN-TSAMPY Ny mpaminany sandoka. Ny fahatanterahan'ny faminaniany no isedrana ny mpaminany iray (Deoteronomia 18.22). Mety hisy famantarana ataon'ny mp...
Deoteronomia 12.20 - 13.1 : DIDY SAMIHAFA
Deoteronomia 12.20&nbsp;- 13.1&nbsp; &nbsp;F.3DIDY SAMIHAFA" … Araka izay rehatra irin'ny fanahinao " (20-21). Tsy misakana ny vahoakany tsy hihinan-kena mihitsy akory Andriamanitra. Sao mihevitra mants...
Deoteronomia 12.1-19 : MANOMPOA AN'ANDRIAMANITRA
Deoteronomia 12.1-19 &nbsp; F.3MANOMPOA AN'ANDRIAMANITRAAza manana andriamani-kafa&nbsp;(1-4). Fantatr'Andriamanitra loatra ny toetran'ny Zanak'Israely. Mora miovaova manoloana ny toe-java-misy lalovany izy...
Salamo 122.1-9 : FOTOANA MANOKANA
Salamo 122.1-9&nbsp; &nbsp;F.6FOTOANA MANOKANAFaly hihaona amin'ny Tompo.&nbsp;Toa hita mihitsy fa tsy andrin'i Davida ery izany hoe hihaona, hisaotra, hankalaza ny Tompo miaraka amin'ireto vahoaka enti...
Filipiana 3.12-21 : NY HAZAKAZAKA KRISTIANA
Filipiana 3.12-21&nbsp; &nbsp;F.6NY HAZAKAZAKA KRISTIANAHazakazaka mitohy.&nbsp;Ny olona nanaiky ny famonjen'i Jesoa dia efa voavonjy (16). Saingy ny fiainan'ny kristiana dia tsy mijanona amin'ny fanana...
Filipiana 3.1-11 : FAMPITANDREMANA AMIN'NY FAMPIANARAN-DISO
Filipiana 3.1-11&nbsp; &nbsp;F.5FAMPITANDREMANA AMIN'NY FAMPIANARAN-DISOFifandraisana miteraka fifaliana latsa-paka.&nbsp;Toy izany ny vokatry ny firaisana amin'i Kristy. Mamaramparana ny taratasiny i P...
Filipiana 2.19-30 : MPANOMPO MAHATOKY
Filipiana 2.19-30 &nbsp; F.2MPANOMPO MAHATOKYFitokisana.&nbsp;Izany no foto-kevi-dehibe aseho amin'ity andalan-tSoratra Masina ity. Timoty sy Epafrodito : lehilahy voazaha toetra, mpiara-manompo amin'i Paol...
Filipiana 2.12-18 : MANOMPO AM-PIFALIANA
Filipiana 2.12-18&nbsp; &nbsp;F.3MANOMPO AM-PIFALIANANy toe-tsaina enti-manompo an'Andriamanitra.&nbsp;Izany no tian'i Paoly ananan'ny Filipiana. Izy dia nafana fo tamin'izany asa fanompoana izany ary m...
1 ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ...201